नेपालगंज भेरी अस्पतालमा जन्मियो करिव ६ किलो बच्चा – Aaj ko Sandesh
योभन्दा अघिल्लो सन्तानका रुपमा जन्मिएका छोरोका समेत तौल चार किलोमाथी रहेको धनाका श्रीमान ललित मगरले बताउनुभयो । भेरी अस्पताल नेपालगन्जका स्त्री तथा प्रसुती रोग विशेषज्ञ डा. युवराज कार्की स्वास्थ्य शिविरको शिलशिलामा राकम पुगेका बेला धनाको स्वास्थ्य चेकजाँच गर्नुभएको थियो । पेटको बच्चा ठूलो भएको भेउ पाएपछि डा. कार्कीले नियमित चिकित्सकको सम्पर्कमा रहन आग्रह गर्नुभएको थियो । धना डा.कार्कीसँग नियमित फ्लोअपमा हुनुहुन्थ्यो ।File photo
केन्द्रीय का’रागारका ३ कै’दीबन्दीको मृ’त्यु : ५० कै’दी र ५६ प्रहरीमा सं’क्रमण पुष्टि !